medical knowledge – စာမကျြနှာ 28 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ကျွန်တော်က ဧရာဝတီတိုင်းကပါ။ အသက်က ၁၈ နှစ်ပါ။ ကျွန်တော်အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် ဆေးလည်းသောက်ပါတယ်။ အကြောလျှော့လေးကျင့်ခန်းတွေလည်း လုပ်ပါတယ်။အစာအာဟာရလည်းစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရပ်ကသိပ်မထွက်ချင်ဘူးဗျ။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ A. အရပ်အမြင့်က အဓိကအားဖြင့် မျိုးရိုးဗီဇနဲ့...
ဇွန် တကယ်တော့ ဆေးသေတ္တာအများစုက သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ဘူးတွေထည့်ဖို့ပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဆေးဝါးတွေထည့်ထားဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဆေးဝါးအများစုကို ခြောက်သွေ့တဲ့နေရာ အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားသင့်တာပါ။ ရေချိုးခန်းအများစုက စိုစွတ်ပူနွေးတာကြောင့် ဆေးဝါးတွေ ပျက်စီးလွယ်၊ အာနိသင်ဆုံးရှုံးလွယ်ပါတယ်။ အိမ်အများစုမှာတော့ အိပ်ခန်းတွေက ဆေးဝါးတွေထားသိုဖို့ ပိုကောင်းတတ်ပါတယ်။ ဆေးဝါး...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းရောဂါ ပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁)၊ ရန်ကုန် ကျွန်မတို့ဆေးရုံမှာ ဆေးပညာစဉ်ဆက်မပြတ် သင်ကြားရေးအစီအစဉ်အရ အထူးကုဆရာဝန်တွေက အလှည့်ကျဟောပြောရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်မ အလှည့်ပေါ့။ ပြောရတဲ့အချိန်က ထမင်းစားပြီး နေ့လည် (၂) နာရီဆိုတော့ နားထောင်တဲ့သူတွေ...